JINGHPAW KASA: မဒဲန်ရွာသားများ၏ ဥစ္စာပစ္စည်းများကို ဗမာစစ်တပ်မှ လုယူ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း - ဖားကန့်လမ်း ကားမိုင်းမြို့အနီး မဒဲန်ကျေးရွာတွင် အောက်တိုဘာ (၂၂) ရက်နေ့ ဗမာအစိုးရ၏ တပ်မ (၈၈) မှ စစ်ကြောင်းများရောက်ရှိလာပြီး ရွာသားများ၏ ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်းများကို လုယူပြီး၊ ရွာသူရွာသားများ ကိုလည်း ညှင်းပန်းနှပ်စက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အောက်အိုဘာ (၂၂) ရက် ည (၈း၀၀ မှ ၉း၀၀) နာရီအတွင် ဗမာစစ်သားများမှ မဒဲန်ရွာမှ ကချင်နှစ်ခြင်း သင်းထောက်ဆရာ ဦးလဟီးခေါင်ဒေါင် နေအိမ်မှ ဦးလဟီးခေါင်ဒေါင်၏ အမှုတော်ထမ်း (၂၅) နှစ်ပြည့်ဂျူဗလီ အထိမ်းအမှတ် ရွှေလက်စွပ် (၂) ကွင်း၊ နားဒေါင်း (၁) စုံနှင့် အ၀တ်အစားများကို လုယူသွားကြောင်း၊ ဆက်လက်ပြီး ဦးထိန်မန်ယော် ၏ ဈေးဆိုင်မှ ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဗမာစစ်သားများ ကြိုက်နှစ်သက်ရာများကို ယူသွားပြီး၊ ကျန်ပစ္စည်းများကို အကုန်ဖျက်ဆီးထားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်သားများမှ မဒဲန်ကျေးရွာသား ဦးဇခုန်ဇော်ခါး (အသက် (၄၀) ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရပါသည်။
ဤဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များသည် မဒဲန်ကျေးရွာမှ ထွက်ခွာသွားပြီး နန့်ဟိုင်ကျေးရွာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်အင်းအား (၄၀) ခန့်က လွယ်ဆိုင်ရွာတွင်နေရာယူထားကြပြီး၊ အင်အား (၃၀) ခန့်မှာ မိုက်ခရိုဝေ့ပ်ရှိရာ တောင်ကုန်းပေါ်တွင်နေရာယူထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်များ သည် ဘွမ်ဆိုင်း တောင်ပေါ်တွင် လက်နက်ကြီးများ တပ်ဆင်ရန် ပြင်ဆင်နေလျက်ရှိကြောင်းလည်း သတင်းရရှိပါသည်။
There wasatorturing and robbing in Ma Den village, it is near the Kamiang and between the Hpakant – Kamiang road, under the KIA (2nd) Brigade area, western Kachin state, on 22nd October. At 08:00 – 09:00 PM on that day, the Burmese troops from the (88) division arrived in the Ma Den village, thieved two golden ring (which the Church gave him asa25 years’ service of Deacon), one golden ornamental ear plug and some dresses from Ma Den Baptist church’s deacon Lahi Hkawng Dau house. And continuously, the Burmese soldiers robbed that the valuable things and destroyed the rest of the shop from Htingman Yaw grocery shop. Moreover, the Burmese troops arrested the Zahkung Zau Hka (40 years old age) from that village. That same Burmese troops left from Ma Dang village and went on to Nam Hai village. As soon as they arrived, (40) Burmese soldiers took security on Loi Seng village, (30) soldiers settled on Microwave hill. And again, these troops were arranging to set up heavy artillery weapon on Bum Sai Mountain.
Myu tsaw niemyen ni hpe hkum lai shangun le pat da u dai nre yang shan hte n gun kachyi kachyi jat nna n gun kaba ti shara lahpang wa sai hkap gasat kau u shan hte gaw mung masa hpawng tim la wu de n gun jat tik tik din yang galaw nga taw ai re shanhte lunh wa ai lam hta hkapjahkring pat ti hkap gapsat u lo sint pala machyu ni ma mai gan kaw na garum lu na matu garai shaman chyeju jaw u ga anhte ramma ni sha n ga gumgai din la WP myu sha ni yawng mungdan lu na matu shakut let akyu hpyi nga ga byi mai yang shanglawt de sa nna n gun jat mungdan hpe gadai hpa tsun tim gashun la saka WP myu sha ni hpe karai kasang shaman chyeju jaw ai sha n ga makawp maga let WP myu sha ni marit nga ai mungdan hpe mung jaw lu na matu mung shaman ya u ga kaw yawngamatu garai shaman chyeju u ga law.
ဗမာတွေ နော် မင်းတို့ မှာမိသားစုမရှိဘူးလား တရိစ္ဆာန်တွေ လား
နောက်ဘဝမှာ ဘာဖြစ် တယ်ညာဖြစ် ခံယူ ထားတဲ့ သူတွေ
လက်နက်အားကိုး အာဏာရူး ကိုယ့်အထက်ကဆိုရင် လက်အုပ်ချီ
ကိုယ့်အောက်က ဆိုနင်းကန်ကျောက် အနှိင်ကျင့် အဲ့ဒါ မင်းတို့ ရိုးရာ
လား ရဟန်းသံဃာတွေဆီမှာ တရားနာတယ် တရားနာပြီး ဟောတဲ့
ရဟန်းတွေကို သတ်ရော ကျန်တဲ့သူတွေဆို ပြောမနေနဲ့ကျက်သရေကို
မရှိဘူး ငါသာအနုမြူရှိရင် မင်းတို့ ကို အလွတ်မထားဘူး
tsun na lam pi nnga sai.htum mat sai.
ကျနော်ကြားဖူးတာတစ်ခုရှိတယ်။မြန်မာပြည်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓသည်ဘ၀ရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်တယ်။ဗမာလူမျိုးတိုင်းတော့မေးလိုက်ရင်ဒီအတိုင်းဘဲဖြေကြတယ်။အခုလက်ရှိကချင်ပြည်မှာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြုအမူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုးံဖြတ်ကြည့်လိုက်တော့ ဗုဒ္ဓကငရဲသားထက်ဆိုးနေတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဆော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးအပြောနှင့်အလုပ်ဟန်ဘ၀င်မကြလို့ပြောတာပါ။ဗမာတွေပြောကြပါသေးတယ်။ကုလားတွေကဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မဟုတ်ဘူးတို့ကမှအစစ်တဲ့။ကုလားတွေကတွေ့တဲ့ဘုရားအကုန်ကိုးကွယ်တယ်တဲ့။မှန်သလားမှားသလားဆိုတာတော့သိမှာပါ။အခုကချင်ပြည်နယ်မှာကြပြန်တော့မိန်းခလေး၊လူကြီးလူငယ်များကိုဖမ်းပြီးဘယ်မှာလဲမင်းတို့ဘုရားပြေညတော့ကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့။KIAတွေတောင်းကြမ်းလို့ရှေ့တန်းထွက်တယ်တဲ့။ဟုတ်လားဆိုပြီးယုံမိတော့ကချင်မိန်းခလေးငယ်များဗိုက်ကြီးတာဘဲတွေ့တယ်။တာသင်မကဘူးကချင်ယောကျာင်္းလေးဆိုရင်၅နှစ်သားအရွယ်ကအစသတ်။ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတို့ဘုရားကမကောင်းတာလုပ်ရင်မကြိုက်ဘူးတဲ့ဗျား။
သူတို့ ရဲ့ အကျင့်ဆိုးကြောင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်နေ့တစ်နေ့ တော့မကြာတာ့ပါဘူး ......?
DONT TALK ANY HOW.WHO ARE YOU?YOUR MUST SEE CARE,BURMESE AND ARMY,WHO IS BAD
Jinghpawkasa e, shiga ningnan hpe la nga nngai.